Zakaria mpaminany - Wikipedia
I Zakaria dia mpaminany fahiraika ambin' ny folo amin' ireo mpaminany madinika 12 ao amin' ny Baiboly. Atao hoe זְכַרְיָה / Zekharyah izy amin' ny teny hebreo izay midika hoe "Nahatsiaro i Iah" ("Nahatsiaro i Iahveh").
Ny fanamboarana ny Tempoly faharoa no tena nanahirana an’ i Zakaria sady nitoriany ny amin’ ny famerenana indray ny voninahitry ny firenena sy ny fanajana amin’ ny antsipiriany ireo lalàm-pitondran-tena sy ny fahadiovan’ ny fombafombam-pivavahana. Ny ivon’ ny toriteny sy fahitan’ i Zakaria dia ny andro fiandrandrana ny fahatongavan’ ny Mesia.
Ny Filazantsara araka an' i Matio (Mat. 23.35), i Jesoa dia nireska fa i Zakaria zanak' i Barakia dia novonoina teo anelanelan' ny alitara sy ny Tempoly: "mba hanody anareo ny rà marina rehetra, izay nalatsaka tambonin' ny tany, hatramin' ny ran' i Abela marina ka hatramin' ny ran' i Zakaria, zanak' i Barakia, izay novonoinareo teo anelanelan' ny tempoly sy ny alitara". I Zakaria no heverina araka ny lovantsofina fa nanoratra ilay boky mitondra ny anarany, dia ny Bokin' i Zakaria.
Atao hoe זְכַרְיָה / Zəḵaryāh, izay midika hoe "Tsarovy i Yah", ny anaran' i Zakaria amin' ny teny hebreo, ka ny Yah dia fanafohezana ny hoe Yahweh.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Zakaria_mpaminany&oldid=1042146"
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 15:13 ity pejy ity.